10 “Chokwadi mweya wangu unosemeswa noupenyu hwangu.+Ndichataura pamusoro pokunetseka kwangu.Ndichataura mweya wangu uchirwadziwa! 2 Ndichati kuna Mwari, ‘Musanditi ndakaipa.Itai kuti ndizive kuti muri kundirwisirei. 3 Zvakanaka here kwamuri kuti muite zvakaipa,+Kuti murambe chibereko chebasa rakaoma remaoko enyu,+Uye kuti muvhenekere zano revakaipa? 4 Mune maziso+ enyama here,Kana kuti munoona sokuona kunoita munhuwo zvake here?+ 5 Mazuva enyu akaita semazuva omunhuwo zvake here,+Kana kuti makore enyu akangoita semazuva omurume akagwinya here, 6 Zvamuri kuedza kutsvaka kukanganisa kwanguNokuramba muchitsvaka chivi changu?+ 7 Pasinei zvapo nokuti munoziva kuti handina kukanganisa,+Uye kuti hapana anokwanisa kununura paruoko rwenyu?+ 8 Maoko enyu akandiumba, zvokuti akandiita+Ini wose, asi mava kuda kundiparadza. 9 Ndapota, yeukai kuti makandiumba nevhu+Uye muchaita kuti ndidzokere kuguruva.+ 10 Hamuna here kundidurura somukakaUye kundiodzeka sezvinoitwa chizi?+ 11 Makandipfekedza ganda nenyama,Mukandiruka nemapfupa nemadzira.+ 12 Makandipa upenyu mukandiratidzira mutsa worudo;+Uye kutarisira+ kwenyu kwakarinda simba roupenyu hwangu. 13 Makavanza zvinhu izvi mumwoyo menyu.Ndinonyatsoziva kuti zvinhu izvi zvinemi. 14 Kana ndichinge ndatadza, imi moramba makanditarira,+Imi hamuti handina mhosva pakukanganisa kwangu;+ 15 Kana chokwadi ndakakanganisa, ndine nhamo!+Uye kana chokwadi ndakarurama, handingasimudzi musoro wangu,+Ndizere nokuzvidzwa uye ndizere nokutambudzika.+ 16 Kana ukazvikudza,+ muchandivhima sezvinoita mwana weshumba,+Muchandiratidzazve kuti munoshamisa. 17 Muchaunza zvapupu zvenyu zvitsva pamberi pangu,Uye muchaita kuti kunditsamwira kwenyu kukure;Matambudziko ari kungotutirana pandiri. 18 Naizvozvo makandibudisireiko muchibereko?+Ndingadai ndakafa, zvokuti hapana kana ziso raizondiona, 19 Ndingadai ndakaita sokunge kuti handina kumbovapo;Ndingadai ndakabudiswa mudumbu ndichienda muguva.’ 20 Mazuva angu haasi mashoma here?+ Iye ngaarege,Ngaarege kunditarira, kuti ndifare+ zvishoma 21 Ndisati ndaenda—uye handizodzoki+—Kunyika yakasviba ine zarima,+ 22 Kunyika yakasviba serima, yezarimaNokusarongeka, ine chiedza chakangoita serima.”